Doorashada Madaxweynaha Mareykanka oo saacadaha soo socda bilaaban doona – STAR FM SOMALIA
Doorashada Madaxweynaha Mareykanka oo saacadaha soo socda bilaaban doona
Dadka Mareykanka ah ayaa saacadaha soo socda u dareeri doono goobaha cod bixinta, si ay ugu codeeyaan Madaxweynihii 45 aad ee uu yeesho Mareykanka, waxaana labada Musharax ee ku loolamaya xilkaas ay ku guda jiraan saacadihii u dambeeyay ee ololahooda.
Musharaxa Xisbiga Jamhuuriga Donald Trump iyo Musharaxa Xisbiga Dimoqraadiga Hillary Clinton ayaa taageerayaashooda kula hadlay fagaare kala duwan, iyagoo weydiistay in codkooda siiyaan.
Illaa 46 milyan oo ruux ayaa lagu wadaa inay ka qeyb qaataan codeynta doorashada Madaxweynaha, iyadoo xarumaha cod bixinta la furi doono subaxnimada hore ee Talaadada waqtiga Mareykanka.
Saadaal la sameeyay ayaa la ogaaday in Hillary Clinton ay ka horeysay Musharaxa kale ee la loomaya Donald Trump.
FBI-da Mareykanka ayaa axadii shaaciyay in aanay wax cadeyn oo dambi ah u aheyn fariimihii email-lada gaarka ahaa ee ay isticmaali jirtay Hillary Clinton, xilligii ay aheyd Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka, taas ayaana la rumeysan inay sare u qaaday rajada Ms Hillary Clinton.
Hillary Clinton ayaa hadii ay ku guuleysato doorashada Madaxtinimada Mareykanka ayaa noqoneysa haweeneydii u horeysay ee taariikhda xilkaas ku guuleysata.
Sidoo kale Musharaxa kale ee Ganacsadaha ah, Donald Trump oo ah nin khudbadihiisa ay murano dhaliyaan ayaa hadii isna uu ku guuleysto waxaa uu noqonayaa ninkii u horeeyay oo siyaasada ku cusub oo ku guuleysta xilka Madaxweynaha Mareykanka.
Si kastaba ha ahaatee waxaa isha lagu hayaa natiijada doorashada Madaxweynaha Mareykanka, waxaana labada musharax ay ku jiraan waqtigii u dambeeyay ee ay ololahooda ka wadaan gobolada Mareykanka.
Donald Trump oo ku guuleystay doorashada Madaxweynaha Mareykanka
Duullaan Kooxda Daacish looga saarayo xaruntoodii ugu weyneyd oo ka bilowday Siiriya (Daawo Sawirro)